Taliyaha Ciidanka Qaranka oo faahfaahin ka bixiyey waxa loo baajiyey xuska 19-guurada Ciidanka iyo dagaalkii Buuhoodle | Berberanews.com
Home WARARKA Taliyaha Ciidanka Qaranka oo faahfaahin ka bixiyey waxa loo baajiyey xuska 19-guurada...
Taliyaha Ciidanka Qaranka oo faahfaahin ka bixiyey waxa loo baajiyey xuska 19-guurada Ciidanka iyo dagaalkii Buuhoodle
Hargeysa-(Berberanews)- Taliyaha guud ee Ciidammada Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Xasan Cabdillaahi (Jidhif), ayaa ka hadlay sababta loo baajiyey xuska sannad-guurada 19-aad ee ka soo wareegtay Curinta Ciidanka Qaran oo labada bishan February ee maanta ku began, isla markaana sannad kasta loo dabbaal-degi jiray oo sannadkan aan la xusin.
Taliyaha Ciidanka Qaranka Maxamed Xasan Jidhif, oo maanta shir jara’aid ku qabtay Miiska Saraakiisha ee magaalada Hargeysa, ayaa markii ugu horreeyey ka sheekeeyey qaabka uu u dhacay dagaal Ciidanka Qaranku khamiistii hore la galay Malleeshiyo Somaliland-diid ah oo ka soo jeeda deegaank Buuhoodle, kuwaasoo taageera wax loogu yeedhay maamul-goboleed oo uu horkacayo dagaal ooge Cali Khaliif Galaydh oo dhawaan lagaga dhawaaqay shir lagu qabtay degmada Taleex oo ka tirsan Gobolka Sool.
Ugu horreyn Taliyaha Ciidanka Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed-Jidhif oo ka hadlaya sababta keentay baaqashada xuska 19-guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay Ciidanka Qaranka, waxa uu yidhi; “Maaddaama ay maanta tahay sannad-guuradii sagaal iyo tobnaad ee aasaaska ciidamada Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa ciidamada jamhuuriyadda Somaliland, carruurahooda iyo xaasaskooda.”
“Illaahay waxaan uga barayayaa inuu cimri dherer iyo bash-bash sannadka cusub ay ku noolaadaan, qaranka dadka reer Somaliland-na mid taas la mid ah ayaan u dirayaa dhammaan gobollada Somaliland, haddy Sool tahay, hadday Buuhoodle tahay, hadday tahay Sanaag, hadday tahay Togdheer, Hadday Tahay Hargeysa, Hadday Tahay Awdal, hadday tahay Salal, intaba waxaan Illaahay idiinka barayayaa inaad nabad-galyo ku noolaataan.” Sidaa ayuu yidhi Taliye Jidhif.
Taliyaha oo ka hadlayey qaabka uu u dhacay dagaalka Buuhoodle Khamiistii hore ku dhexmaray Malleeshiyada Buuhoodle iyo Cutub ka tirsan Ciidanka Qaranka Somaliland, waxa uu yidhi; “Waxaan ka hadlayaa shaqaaqadii ka dhacday gobolka Buuhoodle. Anigu siyaasad ma gelinayo oo runtu sida ay ahayd ayaan idiin sheegayaa. Shaqaaqadu waxay bilaabantay Khamiistan maanta ah Khamiisteedii. Sida aad la socotaan waxa magaaladaas tagay nin fidno wade ah oo dalka maalmahanba ku wareegayay, Taleex buu ka yimi ninkaasi. Umadda reer Somaliland ee halkaa ku sugan waxa uu ugu baaqayey inay dagaalamaaan oo wax xorayn la yidhaahdo oo aan jirin ayuu faafinayey.”
Waxa uu Taliye Jidhif oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo yidhi; “Caafimaadka umadda wax umuu qaban, tacliinta wax umuu qaban, noloshooda kale daryeel umuu sidin, isagu dibadaha ayuu ku nool yahay, carruurtiisiina jaamacadaha ayey ku jiraan. Markaa dadka sidaas ku nool oo waxaas oo dhami ka maqan yihiin oo dawladda Somaliland dedaal ugu jirtay, ee ciidamadu dedaalka ugu jireen, ayuu isku dayay inuu umadda kiciyo oo wax aan suurto-gal ahayn ugu baaqo.”
“Maalintii uu ninkaasi Buuhoodle yimi, dadka halkaas ku nooli waxay isu qabteen laba siyood. Qolo tidhi ninkan innaga daaya waxba inooma sido aan dagaal ahayne, qolana waxay yidhaahdeen wuu imanayaa. Horta dagaalka la sheegayaa wuxuu dhexmaray qolada Somaliland taageersanayd iyo qolada isaga doonaysay. Sagaalkii buu dagaalkaasi bilaabmay. Labadii markii ay ahayd ayaan anigu cutub ka mid ah cutubyada ciidamada Somaliland aan idhi dhex gala oo kala badbaadiya dadkan haseyeeshee, runtu sida ay tahay, waxaanu taageernay dhinacii Somaliland taageersanaa ee lahaa ninkan naga daaya. Dhaawaca iyo dhimashada ciidanka Qaranka wuxuu ku yimi badbaadinta dadka reer Buuhoodle ee taageerayaasha reer Somaliland ah ayaanu taageernay.” Sidaa ayuu yidhi Taliyaha guud ee Ciidammada Qaranka Somaliland Maxamed Xasan Cabdillaahi (Jidhif).
Previous articleXisbiga mucaaridka ah ee UDUB oo ku baaqay inay Somaliland si buuxda uga qaybgasho Shirka Soomaalida ee London
Next articleCiimmada Kenya oo gacanta ku dhigay mid ka mid ah deegaannada Al-Shabaab xarunta u ahaa iyo halista Kismaayo